परामर्श गरौं, पीडा भगाऔं !:: Naya Nepal
परामर्श गरौं, पीडा भगाऔं !
काठमाडौं : एकान्तमा टोलाउने, मनमा कुरा खेलाइरहने, घुलमिल हुन नरुचाउने व्यक्ति देख्नुभएको छ ? यस्ता लक्षण भएका कोही छन् भने सहयोग गरौं। तपाईंको उचित परामर्शले पीडा हट्नेछ।
‘आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले सुरुमा केही न केही लक्षण देखाउँछन्। उनीहरू समस्या सुनाउन मान्दैनन्’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने, ‘नातेदार वा साथीभाइले समस्या सुनिदिई सकारात्मक सल्लाह दिए आत्महत्याबाट जोगाउन सकिन्छ।’
समयमै सकारात्मक परामर्शसहित उपचार विधि अपनाउन सके आत्महत्याबाट जोगाउन सकिने मनोचिकित्सकको सुझाव छ। कोरोना कहरका बेला पछिल्लो पाँच महिनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै ६ हजार जनाले आत्महत्या गर्छन्। डा. पोखरेलका अनुसार हरेक दिन औसतमा १६ जनाले आत्महत्या गर्छन्। पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा झन्डै २० प्रतिशत बढेको देखिन्छ।
विज्ञका अनुसार आत्महत्याको मुख्य कारण मानसिक समस्या नै हुन्छ। मानसिक समस्याका कारण आत्तिने, डराउने, चिन्ता गर्ने र उदास भइरहने लक्षण देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। डर र चिन्ताले दैनिक व्यवहारमै परिवर्तन ल्याए मानसिक समस्या भएको अवस्था मानिने चिकित्सकको भनाइ छ।
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिमा जीवनको मोह नदेखिए मानसिक समस्या भएको हुन सक्छ। ‘कुनै व्यक्ति टोलाउन थाले वा पहिलाझैं रमाउन छोडे र जीवनप्रति वितृष्णा लाग्ने कुरा गर्ने व्यक्तिमा मनोसामाजिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ’, डा. अधिकारीले भने। मानसिक समस्या भए पनि बिरामीले उपचार गर्न नचाहने उनको भनाइ छ।
कतिपय महिलाले घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्या गरेको पाइएको छ। पुरुषहरू पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत कारणले पनि आत्महत्या गर्ने विज्ञ बताउँछन्।
मनोपरामर्श वा उपचार गरेर आत्महत्यालाई रोक्न सकिन्छ। वरिष्ठ मनोचिकित्सकसमेत रहेका डा. पोखरेलका अनुसार धेरैजसो आत्महत्यामा मानसिक कारण जिम्मेवार हुने भएकाले ८० प्रतिशतलाई उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ। ‘साइको थेरापी (काउन्सिलिङ) गर्न सकिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई घुलमिल गराउने र मनका कुरा बाहिर ल्याउन कोसिस गर्दा फाइदा पुग्छ’, उनले भने, ‘सुरुमा मान्दैनन् वा भन्दैनन् तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ।’
साइको थेरापीबाट निको नभए औषधि सेवन (केमो थेरापी) उपचार विधि अपनाउन सकिन्छ। डा. पोखरेलका अनुसार औषधि र परामर्श दुवै गर्न सकेको अवस्थामा आत्महत्याबाट बचाउन सकिन्छ।
त्यस्तै नियमित व्यायाम तथा योग गर्ने, समयमा खाने र सुत्ने गर्नुपर्छ। मनोविद् वा मनोचिकित्सकसँग आवश्यक परामर्श लिन सकिन्छ। ‘सुरुआती खालको मानसिक अवस्थामा औषधि उपचारसमेत नचाहिन सक्छ। जटिल अवस्थामा उपचार गर्दा समय अलि धेरै लाग्न सक्छ’, डा. अधिकारीले भने।
निःशुल्क फोन गरौं
पछिल्लो पाँच महिनामा आत्महत्या गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरेको छ। १६६००१२१६०० टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रमुुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले बताए।